प्रवासीको पीडा : के गुमाउनु मात्रै न्याय हो र ? - Morning Bell
प्रवासीको पीडा : के गुमाउनु मात्रै न्याय हो र ?
Reporter	धनगढी	पुस २५, २०७७
राम शर्मा ‘सडक’
पर्वत, हाल दक्षिण भारत
मानिस सामाजिक प्राणी हो, हरेक मानिसहरु कुनै न कुनै माध्यमले समाजमा जोडिएकै हुन्छ र जोडिनु आवस्यक पनि हुन्छ । सामूहिक तागतले जस्तो सुकै चुनौतिलाई पनि सजिलै चिर्न सक्छ, यो सत्य हो । यसै प्रसङ्गमा झन रोजीरोटीको सिलसिलामा संसारका कुना काप्चामा पुगेका नेपालीहरु विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध हुनु उनीहरुलाई अपरिहार्य नै हुन्छ । चाहे त्यो नेपालको राजनीतिक दलको भातृ संगठन होस्, वा नेपालीहरुको अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था किन नहोस् । हरेक प्रबासी नेपालीहरु संगठित हुनु र समूहमा बाँधिनु उनीहरुको हकहितको लागि जायज हो ।
उपलब्धी के पायो आम प्रवासीले ? जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्व किन नहोस्, प्रवासीहरुको पीडा कहिले अनि कसले बुझ्यो ? हरेक पटक प्राकृतिक प्रकोपले देश रुँदा र सम्बन्धीत पार्टीको आन्दोलन वा अधिवेशन हुँदा आम प्रवासीहरुले आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोग गरेको होइन ? तर हजारौंको संख्यामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरुले पीडित भएर प्रवासी रुँदा कुन चाहिँ राजनीतिक दल वा त्यस्को नेतृत्वले के सहयोग गर्यो ? राजनीतिक दलहरुको भातृ संगठनको नाउँमा अनेक बाहानामा प्रवासीहरुले पसिनाको पैसा किन दिने ? के–को लागि दिने ? यस्तै अनेकौं प्रश्नहरुको जवाफ छ सम्बन्धीत निकायसँग ?
तर संगठनको नाउँमा स्वदेशका राजनीतिक दलहरुको पक्षपोषण गर्ने, नेताहरुको भजन गाउँने, विभिन्न बाहानामा प्रवासीहरुको पसिनाको पैसा पार्टी कार्यालय र नेताहरुको पकेटसम्म पुर्याउने कार्य चाहिँ आपत्तिजनक छ । बर्तमान देशको बागडोर सम्हालेका प्रायँ नेतृत्वकर्ताहरु भारतमा रोजीरोटीको लागि तल्लिन रहेका प्रवासी नेपालीहरुले आफूले आधा पेट खाएर तिनिहरुलाई पाल्नेदेखि देशमा राजनीतिक संकट पर्दा आफ्ना गुमाएर राजनीतीक नेतृत्वलाई अडाएको ईतिहास छ ।
फेरि पनि बर्तमान अवस्थामा देश भित्र राजनीतिक संकटले चरम चुली पार गरिरहेको र देश त्यहीँ राजनीतिक भूमरीमा फसिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी जोगाउन र आफ्नो शाख बचाउन भारत प्रवासमा रहेका सम्बन्धीत संगठनका केही दुई/चार जना नेतृत्वहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारी हैसियत दिएर आम प्रवासीहरुलाई समेटने आसय देखिइरहेको र बुझिएको छ । आखिर खेल पुरानै हो । विगतमा पनि भारत प्रवासबाट पार्टीको जिम्मेवारी हैसियतमा केही नेतृत्व भएकै थियो ।
आदरणीय आम प्रवासी नेपाली आमाबुवा, दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरु, उल्लेखित प्रश्नहरुको एउटै जवाफ हामीहरुसँगै छ । प्रवासी नेपाली पीडितहरुको सेवा गर्नको लागि कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठन नै चाहिन्छ भन्ने छैन । न कुनै सरकारी मान्यता पाएको संस्थाको । गहिरिएर सोच्ने र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुनुको विकल्प छैन । प्रवासी नेपालीहरुको सहयोग पीडित प्रवासी नेपालीलाई नै उपयोगको लक्ष्य लिएर हामी किन नउभिने अब ? समयले पर्खिँदैन, त्यसैले आजै संकल्प गरौं स्वतन्त्र रुपमा गोलबन्द भएर पीडित प्रवासीहरुको सेवामा तल्लिन होऔं ।
२५ पुस २०७७, शनिवार २०:५४ बजे प्रकाशित
धनगढीबाट काँग्रेसले भन्यो, ‘ओलीले थप अप्रीय कदम चाल्न सक्छन्’
फेसबुकमा ‘गुड्बाई’ लेख्दै गायक केसीले गरे बेलायतमा आत्महत्या
शिक्षक र विद्यार्थीमा संक्रमण, पढाइ बन्द
डा.रावलद्धारा नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
भारतमा सेना प्रमुख चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना